I-China CHINA INKQUBO YOBUCHULE 94V0 RIGID 8L HDI CONTROL BOARD PCB PROTOTYPE MULTI-LAYER IBHODI YOKWENZA IBHODI YOKWENZA abavelisi kunye nabathengisi | PhiliFast
Ubungakanani bePCB: 96 * 96mm Isilikhi: mhlophe
Uluhlu Lolwaleko: 8 / L Cu Ukutyeba 35um (1oz)
Zonke ii-PCBs zivavanywa ngombane nge-100%. Banokukhetha bathumele ii-PCB koomatshini bokuhlola u-E ngokuzenzekelayo, kwaye babeke ii-PCB kwiindawo ezimiselweyo emva kovavanyo, ngokwesiphumo sovavanyo; Zonke ii-PCB zi-100% zihlolwe ngokubonakalayo. Zonke iimvavanyo kunye nokuhlola iziphumo zirekhodwa kwingxelo yohlolo kwaye zithunyelwa kunye neePCB.
Ngaphezulu kweminyaka eli-14 yamava kwimveliso ye-PCB. Injineli yobungcali kunye neqela lokuthengisa phesheya kwimveliso ye-PCB ebandakanyeka ngokupheleleyo kwiinkqubo zeshishini liphela. Yenzelwe kwaye yenziwa i-PCBs ezintsonkothileyo, ezinokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho zoyilo kunye nemveliso.
Ngaphezulu kwe-80% yezixhobo zemveliso ezenzekelayo, iphucula ukusebenza kwemveliso kunye nomgangatho wemveliso.Kwaye iintlobo ngeentlobo zezixhobo ezaziwayo zophawu zisetyenziswa kuzo zonke iinkqubo, kubandakanya ukumba, ukungafaki umbane, i-Electroplating, i-Etching, i-Solder Mask, i-Silk Screen, i-Chemical Gold, i-Electrolytic Igolide, i-CNC Profiling, Ukuvavanywa kombane, kunye nokuPakisha.
Kuba siqhutywa ngokuthe ngqo ngumzi-mveliso, amakhonkco aphakathi ashiyekile. Okwesibini, sinenkqubo epheleleyo yolawulo lwesixokelelwano sonikezelo lokulawula iindleko zemveliso, imveliso kunye nemithombo yokuthenga. Siza kukunika elona xabiso lokuthenga litshiphu ukuthelekisa nezinye iifektri okanye abavelisi ngelixa uqinisekisa umgangatho olungileyo.
Q1.What ntoni sifuna ukuba PCB okanye PCBA locaphulo?
I-PCB: Iifayile zeGerber / iifayile zePBB, ubuninzi, iinkcukacha zebhodi yokulungisa (izinto zebhodi, ubukhulu, ubukhulu bobhedu, unyango lomphezulu, umbala wemaski ye-solder kunye nesilika)
I-PCBA: Ngaphezulu kolwazi lwe-PCB, i-BOM enezinto ezithile, ukuvavanya i-doc ukuba unayo.
Umbuzo Ngaba sine-MOQ?
Akukho MOQ kwi TAILHOO. Siyakwazi ukuvelisa umthamo omncinci kunye nemveliso yevolumu enkulu ngokuguquguquka.
Umbuzo. Ngaba iifayile zam zikhuselekile?
Ewe. Zonke iifayile zoyilo zabaxhasi bethu zihlelwe kwaye zikhuselekile. Kwaye asizokwabelana nomntu wesithathu. Ukuba i-NDA ifuna, siya kutyikitya.
Umbuzo Ukuba imveliso iyasilela emva kokufumana, kufuneka ndenze ntoni?
Siya kuba noxanduva lwayo yonke imveliso esiyithumelayo. Ukuba usithumele ii-docs zovavanyo, siya kuthi gurantee i-0% yenqanaba elinesiphene, oko kuthetha ukuba ufumana ezo zinesiphene, siya kuba noxanduva lwazo. Ukuba awunayo i-docs yovavanyo, siza kugalantee i-0.3% yenqanaba elinesiphene.
Umbuzo 5. Ukuba ndineesampulu kuphela, ndingayivelisa?
Ewe. Singayikopa kwaye sivelise ngokusekwe kwiisampulu zakho.
Q6. Imali yohambisa ngenqanawe?
Iindleko zokuhambisa zixhomekeke kwindawo ekuyiwa kuyo, ubunzima, ukupakisha ubukhulu. Sinokucaphula kuwe xa kugqitywa imveliso, okanye kwangaphambi kokuba imveliso iqale.
Egqithileyo Iibhodi zeeSekethe zeSekethe yeeMveliso eziNinzi eziLuhlaza, iMveliso ye-elektroniki yokuvelisa i-PC ye-PC ye-PCBA eShenzhen
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu 4L FPC Flex PCB IBhodi Flexible Ishicilelwe Circuit IBhodi OEM Ukubumba Kwaye Indibano ETSHAYINA CHINA